कस्ता महिला बढी सेक्सी हुन्छन् ? फोटो फिचर सहित...
Posted: 2018-06-23 15:19:09
Posted: 2018-06-23 09:19:12
डा. राजेन्द्र भद्रा- महिला हस्तमैथुन आफैंलेआफ्नो यौनाङ्ग चलाउने, घर्षण गर्ने वा दबाउने जस्ता क्रियाकलाप गरेर यौन आनन्द प्राप्त गर्ने यौन क्रियाकलाप नै हस्तमैथुन हो । सामान्यत: पुरुषले मात्र गर्ने मानिए पनि महिलाले पनि हस्तमैथुन गर्छन् ।...
केटीहरुलाई लभ गर्न चकलेटी केटा मनपर्छ तर विवाह गर्न अर्कौ , यस्तो छ कारण !
Posted: 2018-06-22 08:29:05
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- जब मानिस किशोर अवस्थामा पुग्छ तब ऊ सबैभन्दा बढी विपरित लिङ्गीप्रति हामी आकर्षित हुन्छ । यो बेला नै हो मान्छे सबैभन्दा बढी चञ्चल हुने अनि गलत निर्णय लिने अवस्था । तर पनि कतिपय मान्छेले यही अवस्थालाई पनि संयमित तरिकाले व्यवस्थापन गरेर जीन्दगीको उद्देश्य भेट्टाउँछन् ।...
विश्वकै सेक्सी र राम्री नर्सः केरीना लिन
Posted: 2018-06-22 08:23:41
सुनाखरी न्युज/ ताइवान- २३ वर्षीया नर्स केरीना लिनले विश्वका मिडिया र सामाजिक सञ्चालको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सफल भएकी छिन् । ताइवानको एक अस्पतालमा रहेकी केरीना लिन अत्यन्तै आकर्षक र सेक्सी छिन् । उनी अस्पतालमा नर्सका रुपमा कार्यरत छिन् । सेक्सी नर्स लिनलाई हेर्नकै लागि अस्पतालमा पुरुष बिरामीहरूको थेगी नसक्नु भिड लाग्नेगरेको छ । पुरुष बिरामीहरू राम्रा नर्सका लागि अस्पताल आउने गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।...